Diesel Engine Generator Set,Guriga Diesel Generator,Generator Mini-Generator
sida loo joojiyo garsoorka si sax ah
5.1 Fadlan marka hore dami jebiyaha ka dibna u dhaqso baabuurka si joogto ah oo ku hayso 3 daqiiqo oo maqnaansho ah ka hor intaadan joojin. Ha ka tegin mishiinka haddii ay jirto xaalad degdeg ah. 5.2 Fadlan si toos ah u qaado batteriga adigoo isticmaalaya awoodda dawladda hoose Garsoorka ayaa ka tagay aan la isticmaalin. 5.3 Kala saar dhammaan biyaha qabow marka marka gorma uu sii wado isticmaalka...
Tags : koronto-dhaliye qalabka korontada koronto-dhaliyaha
4.1 Haddii mishiinku uu ku jiro bacalka bilawga qabow, fadlan u sii wad 5 daqiiqado la'aantiis; haddii mashiinku uu ku saleysanyahay aasaas diirran, fadlan qaado ka dib marka cadaadiska shidaalka la dhiso; fadlan si deg deg ah u dardar geli oo gadaal ka dib heerkulku wuxuu kor u kacay illaa 60 ℃ . 4.2 Fadlan sii wad 50 saacadood gudahood jabinta ama socota haddii ay tahay mid cusub mishiin ama...
Tags : qalabka korontada koronto-dhaliyaha dhalashada
• Aaladda batterigu waxay ku gubi kartaa dharka iyo maqaarka ama waxay keeni kartaa indho la'aan haddii ay dillaacdo. Fadlan xiro dharka ilaalinta marka aad baareyso a batteriga ka hor intaan la joojin / gaadiidka. • Hubso in bateriga la rakibay oo la buuxiyo heerarka saxda ah iyo isku dhafka elektaroolka oo si buuxda loo soo oogo. • Haddii hawo lagu rakibo, hubi inay si adag u socdaan. • Ka h...
Tags : qalabka korontada dhalashada xargaha batroolka
Beteriyada Dayactirka Wareegga Guud
Digniin: 1. Hubi shaqaalaha in loo tababaray isticmaalka iyo isticmaalka habboon ee bateriga. Had iyo jeer xiro qalabka ilaalinta shakhsiyeed ee saxda ah (PPE) markaad maareyn karto batariyada. 2. Baadhitaanka dayactirka bateriga waa in sidoo kale la dhammaystiraa iyadoo qayb ka ah kormeerka dayactirka joogtada ah. 3. Had iyo jeer xiro PPE habboon markaad qabato qalabka korontada. Haddii lagu xoqa...
Dhibaatada hagaajinta ee loogu talagalay koronto-dhaliyaha
Jeegaga Hore ee Jeneraalka
The Jadwalka soo socda ee hoos kuqoran ayaa ah hawlaha kaliya ee loo baahan yahay in shirkadiisu tahay qaado. The marka la fiiriyo jeegaga waa in la sameeyaa ka hor inta aan la bilaabin qalabka korontada : 1. Iska hubi Furaha Furaha / Furaha Furaha Sawir kormeerku waa inuu qaataa dhowr daqiiqo oo keliya wuxuuna ka hortagi karaa dayactirka qaaliga ah iyo shilalka - Loo-shaqeeyaha ugu sarreeya ee no...
Habka kantaroolka elektarooniga ah ayaa loo qaabeeyey loona rakibay si loo xakameeyo lana socdoqalabka korontada. Iyada oo ku xiran shuruudaha qalabka korontada,mid ka mid ah dhowr habab oo kala duwan oo lagu xakameyn karo heerarka caadiga ah ayaa lagu rakibi karaa. Nidaamyo kale oo dheeraad ah ayaa lagu rakibi karaa qalab gaar ah taas oo kiiskeedu gaarayo dukumintiyo gaar ah.Nidaamyada kantaroolk...
Tags : Generator Set Jenerayaha Dooro Cummins Engine Perkins Generator Set
Habka kantaroolka elektarooniga ah ayaa loo qorsheeyay oo lagu rakibay si loo xakameeyo loona kormeero jenerayarka Waxay ku xiran tahay shuruudaha Diesel qalabka korontada , mid ka mid ah dhowr nidaam oo kala duwan oo la xakameyn karo ayaa loo isticmaali karaa. Nidaamyo kale oo dheeraad ah ayaa lagu rakibi karaa qalab gaar ah taas oo ay dhici karto in dukumiintiyo gaar ah la bixiyo. Nidaamkan kant...
Tags : Jenerayaha Diesel Diesel Engine Generator Qodobka Gawaarida Diyaalka Diyaaliga ee Low
Nolol-Dhulka Qaranka (NEL) ee loo yaqaan "generator"
Ka hor inta qalabka korontada waa la shaqeeyaa fadlan la tasho degmadaada iibiyaha si loo ogaado in NEL loo rakibay iyo in kale. In kasta oo ka badan hal meel oo NEL ah goob kasta waxay noqon kartaa badbaado, waa muhiim samee haddii mid hore loo soo dhajiyay goobta. Iyadoo ku xiran on rakibaadda alaabta gaarka ah, Xuduudaha-Earth-Link waxaa laga yaabaa in looga baahdo qalabka korontada ayaa sameey...
Tags : Generator Set Diesel Generator China Diesel Engine Generator